true conditions /zu-ZA/tools-for-life/conditions/steps/survival-and-ethics.html quiz 14 21 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/conditions_zu_ZA.jpg Ukuziphatha neZimo
Uma izibalo zokubonisa isimo zakho zithuthuka ngaphambi kokuba zonke izinyathelo zomthetho zenziwe: 2
Kepha wenzani uma igrafu yakho yezibalo zokubonisa isimo ikhombisa ukuthi usususe isimo ngaphambi kokuthola nethuba lokugcwalisa ifomula? Ngabe umane ulahle lelo fomula bese uqala elilandelayo? Impendulo ithi “Cha.” Ugcwalisa ifomula osuyiqalile.
Uqeda bese ugubha. Ukhetha futhi ukhethe noma yiziphi izinyathelo ezisele. Ugcwalisa ifomula osuyiqalile.
QAPHELA: Unezimpendulo eziningana ebezingalungile. Ukuze uqhubeke, kufanele uphinde ufunde indatshana Ukugcwalisa Izimo Zamafomula bese uhlola ukuqonda kwakho futhi.